Kormaan handaaqqoo gurguraaf gaba bahe warqee giraama 1.75 liqimse – Fana Broadcasting Corporate
Kormaan handaaqqoo gurguraaf gaba bahe warqee giraama 1.75 liqimse
Finfinnee, Qaammee 5, 2011 (FBC) – Kormaan handaaqqoo gurguraaf gaba bahe warqee faaya gurraa giraama 1.75 liqimse.
Dhimmichi kan raawwaate Qaammee 3, 2011 Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti.
Abbaan qabeenyumma kormaa handaaqqoo kanaa obbo Dannaqaa Shallamaa gurguraaf gabaa kan baasaan, bituuf gaaffiirra kan jirtu warqee faaya gurraa aadde Haacaltuu badiruu giraama 1.75 gurra isheera butuun liqimse.
Ta’ichaan booddee abbaan kormaa Handaaqqoo kanaafi haati warqee gara waldhabdeetti seenaniiru.
Haati warqeee aadde Haacaltuun yeroodhuma sana Handaaqqichi qalamee warqeen isaani akka kennamuuf yoo gaafataan, abbaan haandaaqqichaa dhimmicha hin fudhanne.
Dhimmichi gara waldhabdeetti adeemuu isaa kan hubataan namoonni gara waajira poolisii akka deemaa taasisuun naannicha kan argamu gara waajira poolisii magaalaa Walisoo deeman.
Dhimmichi haaraa kan itti ta’e waajjirii poolisii magaalaa Walisoo dhimmicha waliigalteen akka furataan ajaja kenne.
Abbaan Handaaqqoo aadde Haacaltuun gatii Handaaqqichaa kennanii akka fudhataan jechuun waliigalu.
Obbo Dannaqaanis haati warqee birrii 250 akka kennaan yoo gaafatan aadde Haacaaltuun birrii hanga kana hin qabu, birrii 150 kennuun dhimmicha karaa nagaan furachuu isaanii Qajeelcha Poolisii Magaalaa Walisootti Hoogganaa Kominikeeshini Diviizhinii Komaandeer Kabbadaa Badhaadhaa himaniiru.